Abaalmarinta Augustpris oo xalay la bixiyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abaalmarinta Augustpris oo xalay la bixiyay Foto: Jonas Ekströmer/TT
Abaalmarinta Augustpris oo xalay la bixiyay
La daabacay tisdag 25 november 2014 kl 15.00
Abaalmarinta ugu weyn dhanka suugaanta ee ay Sweden bixiso ayaa shalay la bixiyay. Kristina Sandberg oo ah qoraaga buugga Liv till varje pris ayaa kaalinta koowaad ku gashay buuggeeda oo ah mid suugaaneed.
Dhanka kale waxaa abaalmarin helay farshaxanka Lars Lerin oo qoray buugga Naturlära. Sidoo kale buugga Mördarens apa ee uu qoray Jakob Wegelius ayaa isna abaalmarin helay. Buuggan ayaa ah carruurta iyo dhallinyarada ku saabsan. Dhanka kale Matilde Villegas Bengtsson ayaa iyana abaalmarin ku heshay qoraalkeedii Orangeriet, waxaanay iyadu heshay abaalmarinta loo yaqaan lilla Augustpris.
Abaalmarintan Augustprisgalan waxa la bilaabay sannadkii 1989, waxaana sannad kasta abaalmarin la siiyaa dadka ku guulaysta qiimaynta suugaanta noocyadeeda kala duwan. Abaalmarintan ayaa ka kooban bilad miisaankeedu yahay 3 kiiloo iyo lacag dhan 100 000 karoon. Halka abaalmarinta lilla Augustpris ay lacagteedu tahay 15 000 karoon.